Ngezinye izikhathi emphilweni wonke umuntu kunezimo lapho kudingeka ngokuphuthumayo imali eningi, futhi imithombo nokuxhasa wena abanawo. Kulokhu, kungcono ukusebenzisa amabhange.
Singabonisa kanjani ukuthola imali-mboleko eside ngaphandle isidingo iphakheji elikhulu kwemibhalo? Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nalezi zinsizakalo Sokubambisana ingatholakala engosini ethi isixhumanisi http://atcb.ru/. Kukhona okunhlobonhlobo izinhlobo ukubolekisa emakethe services yasebhange. Abanye amaklayenti ukuthatha ukubolekisa umthengi ukuthengwa kwezimpahla ezibizayo. Abanye basebenzisa ama-credit card ukuze ukhokhele ukuthengwa zabo ezinkulu ezivamile. Futhi amabhange atsheleka kumakhasimende abafisa ukuthenga impahla noma izinto zokuthutha siqu.
Neqiniso iklayenti kuyadingeka kuphela ukuqonda lapho kunenzuzo kakhulu ukuboleka. Kulokhu, ungasebenzisa wokubala inthanethi kumasayithi ezikhethekile. Kubalulekile ukuba acabangele isikhathi nezibopho ukukhokhelwa, kanye inani lenzalo. Kubaluleke kakhulu ukuba baqonde indlela Inzalo ibalwa. Kwezinye izimo, baye kubalwa inani lemali mboleko. Kodwa futhi kwenzeka ukuthi isithakazelo kungaphansi lemali asalile. Usayizi inkokhelo yanyanga zonke kancane kancane.
Ezweni lethu kukhona izimo lapho abantu abavamile futhi bazishaye isifuba ngokuthi ukwelashwa okubizayo. Yiqiniso, iningi lezi zimo, isiguli umane uye ndawo ukuya. Kodwa uma ubheka emnyombweni wendaba, kubonakala sengathi okuningi inzuzo engaphezulu ukuthenga inqubomgomo VHI ukusebenzisa amasevisi kwemitholampilo okuholela ezweni mahhala.
umshuwalense wezempilo zokuzithandela ngokubaluleka kuthandwa phakathi abathengi. Akukho lutho isimanga kuleli. Abantu are jwayele ukuhlela ukuphila kwakhe, aqonde ukuthi isidingo wenziwa ngodokotela abaqeqeshiwe of emitholampilo yangasese zihlale zikhona. Futhi ngakho ungenawo ukuboleka imali abangane noma cha ukukhipha loan, kungcono ukuxhumana inkampani yomshuwalense.
Kube kufanele nakanjani inikelwe izinketho eziningana for nokubambisana. Waphenduka wabheka la womshuwalense, uthola eziningi eziwusizo. Kakade ngemva kokuba inkokhelo yokuqala isamba ezincane ingasetshenziswa zokwelashwa eliphezulu. Futhi ngokuvamile inqubomgomo awasebenzi kuphela ezweni lenkaba yakhe, kodwa futhi phesheya.
Refinancing loan, "Ibhange lase-Moscow": nemibandela
Umgomo wezimali: Izinjongo, izincazelo kanye imiqondo
Usuku lwegama lika-Igor ekhalendeni lama-Orthodox